Samsung's Galaxy S11 uye S11 + zvinotarisirwa kuvhurwa musi wa11 Kukadzi. Ivo vanogona kunzi iyo Galaxy S20 zvakadaro, nerunyerekupe rwakawanda runoratidza kuti Samsung iri kuzochinja zita.
Ichi chiitiko chinotenderera kwese kunobuda, runyerekupe uye kufungidzira kwakatenderedza inotevera Galaxy S mureza . Hezvino zvese zvatinoziva kusvika parizvino nezve inotevera Samsung Galaxy S.
Chii chinotevera chinonzi Galaxy S chinodaidzwa?
Kutevera kuoneka kwezita reS20, panga paine imwe hurukuro yekuwedzera inoratidza kuti Samsung inogona kuchinja mazita kubva kuS11 iyo yaifungidzirwa kumhuri yeS20 pachinzvimbo.
"Ultra" ingori imwe yekwaniso, kune dzimwe sarudzo, kuti dzisimbiswe, uye Ndeipi izwi raunofunga kuti rakanakisa?
- Ice universe (@UniverseIce) December 31, 2019
Izvo zvinogona kuona kumiswazve kwemidziyo yeSamsung, ichiona iyo Galaxy S20 seyekuvandudza kune iyo S10e uye kutangira kumusoro kune iyo S20 Ultra (kana rimwe zita) senge yepamusoro chishandiso. Sekureva kwemishumo kubva kuKorea midhiya, zita reS20 rakasimbiswa neSamsung mumusangano wakavharirwa madhoo kuCES 2020, kunyangwe isu tichingozevezerana internet kuti tione izvi.
Nekudaro, isu tine mamwe manhamba emhando: SM-G980, SM-G985, SM-G988 inotarisirwa kuve nhamba dzemhando dzemidziyo iyi - uye codename inofungidzirwa kuva Hubble, kunge teresikopu.
Ticharamba tichigadzirisa sezvatinonzwa zvimwe, asi isu tiri kuchengeta mamwe mareferensi eS11 kungo chengetedza zvinhu zvakajeka.
Iti makadiiko kuGirazi nyowani rose. Isina kuvhurwa munaFebruary 11, 2020 #Samsung Chiitiko pic.twitter.com/ln1pqt2vu7
- Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020
Samsung Galaxy S20 kuburitsa zuva uye mutengo
11 Kukwidza chiitiko chiitiko chakasimbiswa
Kutanga kwaKurume kusunungurwa kungangoitika
Mitengo kubva pane imwecheteyo £ 669 inotarisirwa
Samsung ina yakazivisa kuti Galaxy Haina Kuburitswa zvichaitika musi wa11 Kukadzi. Kambani haina kusimbisa zviri pamutemo izvo zvichaziviswa, asi isu tinofungidzira kuti ichave iyo S20 uye iyo Fold 2 - kana Bloom sekudaidzwa kwainogona kuitwa. Iyi nzvimbo inosimbiswa kuti ichaitika muSan Francisco uye ichatanga na11am PST, 7pm GMT.
Panyaya yemitengo, iyo Galaxy S10 yakatanga pa £ 799 uye the Galaxy S10 + yakatanga pa £ 899, iine diki uye isingadhuri mudziyo inowoneka muchimiro cheGirazi S10e, inowanika kubva pa- $ 669.
Isu hatitarisiri kuti iyo Galaxy S20, S20 + uye S20 Ultra ive inodhura pane avo vakavatangira. Kana paine chero chinhu, isu tinotarisira kuwedzera kwemutengo sezvazvaive zviri pakati peS10 uye S9.
Metal uye girazi zvingangodaro
Simba yekuvaka yakasimba
Centralized yepamberi punch hole kamera
Iyo Samsung Galaxy S20 ingangoita mashoma mashanduko ekuchinja uye runyerekupe rwekutanga runodudzira kuti dhizaini ichataridzika chaizvo zvakafanana nechizvarwa chakapfuura, ine girazi kumberi nekumashure nesimbi simbi.
Aya ekutanga anodudzira zvakare anoratidza kuti kamera module kumashure kwefoni ichave yakakura - pane kuve yakashomeka - yekutarisa kwakashinga. A foto inodonha kubva munaDecember 2019 inoita seinogadzirisa izvi.
Mazhinji rhemu anonongedza akananga kudiki punch hole pamberi kamera iyo yakagadzirirwa pakati iyo Cherechedzo 10 yakatevedzana, ichipa kutaridzika kwakanyanya - uye izvi zvinotarisirwa pamhando dzose dzakasiyana dzeS20 / S11.
Zvese dhizaini dhizaini zvinoratidzwa mune nyowani Samsung Galaxy S10 Lite, yakaziviswa muna Ndira 2020, asi ichizorodza dhizaini.
Samsung Galaxy S20 kuratidza
Dhizaini-kumucheto dhizaini inotarisirwa, 120Hz
Samsung inozivikanwa nekupa yakanaka AMOLED kuratidzwa uye iyo Galaxy S20 zvishandiso pasina mubvunzo ichava neiyo tech kune bhodhi.
Masayizi matatu akataurwa nezve 2020 zvishandiso uye zvinonzi zvese zvinopa zvakavezwa zvakapetwa kumucheto dhizaini. Pakutanga, iyo Galaxy S10e yakanga iine dhizaini dhizaini. Hukuru hwakataurwa se6.2, 6.7 uye 6.9-inches zvichiteerana pamidziyo iyi. Zvinonzi zvakare Samsung ichave ichiisa 120Hz kuratidza mune izvi zvishandiso.
Isu tinotarisira kuona mavara anoyevedza, HDR10 + rutsigiro uye kugadzirira kwakadzikama pamateru matatu aya, kunyanya kana iri Galaxy S20 + uye S20 Ultra.
Yakakura kumashure kamera unit
Makamera mana kana mashanu anotarisirwa
5x Optical Zoom Runyepedzero rweS20 +
108-megapixel main sensor inotarisirwa
Nemakwikwi acho achinyanya kupisa mudhipatimendi re-kamera kamera, Samsung inoratidzika kunge iri kuita shanduko huru yeGPS S20 uye S20 +.
Pakave nekutaura kwekuiswa kweiyo 108-megapixel sensor, pamwe nerutsigiro rwe8K vhidhiyo yekurekodha. Samsung yatogadzira iyi sensor - iyo iwe yaunogona kuwana mu Xiaomi Nyaya Yangu 10 - saka iyo nzvimbo iripachena yekuti iratidzike iri mune yayo yega mureza. Nekudaro, pane runyerekupe rwekuti ma sensors maviri haazove akafanana uye akafanana. Iwo anogona kuve iwo maficha eiyo S20 Ultra, parizvino haina kujeka kuti zvese zvishandiso zvinoparara sei.
Kubva pane izvo zvinopihwa uye mufananidzo wemidziyo yaonekwa kusvika parizvino, zvinoita kunge Samsung Galaxy S20 Ultra inogona kuva nemakamera mashanu kumashure (kana mashanu ma sensors, vangangodaro vese vasiri makamera akazvimirira). Iyo Galaxy S20 + inogona kunge iine uye iyo S20 nhatu, zvichienderana nemifananidzo iyi yekutanga.
Zvave zvichinzi Samsung iri kushanda pane periscope-senge kamera iyo inobvumidza 5x Optical zoom uye iyo yakafananidzirwa mune kumwe kudonha kwazvino. Kune zvakare runyerekupe rwekuti Samsung iri kuenda mushure mekugadziriswa, kuti iri kuzoshandisa 48-megapixel sensors kune ayo akafara-kona uye telephoto lenses.
Zvinogona kunge Samsung Galaxy S20 zvishandiso zvichamhanya pane ichangoburwa Exynos chipset, iyo Exynos 990, kana yazvino Qualcomm Snapdragon 865, zvinoenderana nedunhu. Isu zvakare tichaona pamwe kutsigirwa kwe microSD, dzinoverengeka sarudzo dzekuchengetera, uye hutano hutano hwe RAM.
Runyerekupe akataura kuti Samsung iri kushanda pane 3D kumeso kumeso senge Chiso cheApple ID, uye nekuratidzira iyo Face ID logo padanho kuCES 2020, isu tiri kutarisira zvakanyatsoita mashandiro akafanana. Isu tinotarisirawo kuona bhatiri rinotsigira zvese zvisina waya kutengesa uye reja waya isina waya.
Samsung Galaxy S20 runyerekupe: Chii chaitika kusvika parizvino?
Heano kwese runyerekupe uye kusvetuka kwakakomberedza Galaxy S11 kusvika zvino.
10 Janaury 2019: Mamwe magwaro ekusimbisa mune iyo inotevera Samsung mureza foni ichanzi iyo Galaxy S20
Mishumo inodaro Samsung yakasimbisa zita rezvinounza ruoko rwake mumashure-akavharwa-magonhi musangano paCES 2020 neKorea media.
5 Ndira 2019: Samsung inosimbisa Galaxy Unpacked chiitiko
Samsung ina yasimbiswa iyo Galaxy Unpacked ichaitika 11 Nyamavhuvhu.
5 Ndira 2019: Leak inoratidza 120Hz zororo reti
- Ice universe (@UniverseIce) January 5, 2020
31 Zvita 2019: Humwe ufakazi hunoratidza Samsung inogona kuburitsa iyo Galaxy S20 muna 2020
Kufungidzira kwakapararira pamusoro pekudanwa kweiyo inotevera yeGlass S inoona kumwe kururamisa.
27 Zvita 2019: Samsung inotevera Galaxy inogona kunge iri Galaxy S20, kwete S11
Just kudonhedza zita S20 zvakakonzera kuwanda kwekufungidzira kuti Samsung inotevera Galaxy S inogona kunzi S20.
18 Zvita 2019: Kamera zvirevo zvakaratidzwa kusanganisira periscope telephoto
More details ramba uchiwoneka pane Samsung Galaxy S11 kamera.
11 Nyamavhuvhu 2019: 18 Kukadzi kuvhurwa zuva rakakurudzirwa
It yakapihwa zano kuti Samsung Galaxy S11 nhepfenyuro ichatangwa musi wa 18 Kukadzi pachiitiko muSan Francisco, pamberi peSoftware World Congress.
9 Zvita 2019: Samsung Galaxy S11 kuve neiyo 108MP kamera
Isu tatoona kuwanda kwemakera anodonhedza iwo anouya modhi, asi a akavimbika leaker akataura kuti i108-megapixel sensor.
9 Nyamavhuvhu 2019: Samsung Galaxy S11 foto inodonha, zvichidudza kuti runyerekupe rwe kamera nderechokwadi
Ehe, aya haazi emhando yepamusoro mafoto uye tinoziva kuti pachave nezvizhinji zvinouya, asi kana zviri zvechokwadi, saka vanogona kuenda neimwe nzira kutsigira zvirevo zvatakaona zvichionekwa mumavhiki apfuura.
27 Nyamavhuvhu 2019: Samsung Galaxy S11 + dhizaini inoburitswa, ine hombe kamera module
Ikozvino kuburitsa kunoratidza dhizaini yakafanana neiyo S11e uye S11 iyo yatakaona kare, asi inokwevera kutarisisa kune iyo hombe kamera module kumashure.
Izvi zvinoshandurwa kubva @onleaks uye CashKaro.com uye kamwe zvakare tinofunga kuti vanotiratidza izvo iyo SSG S11 ichapa.
25 Nyamavhuvhu 2019: Samsung Galaxy S11e inopa inoratidza katatu, kamera mbiri uye yekupedzisira inoratidza
Serial leaker @OnLeaks uye Pricebaba vakaburitsa iyo 360-degree renders inoratidza iyo Galaxy S11e ine yepakati punch hole hole kamera kumusoro - yakafanana neyeCherechedzo 10 mamodheru - pamwe neayo maviri mapendero ekuratidzira.
Iwo ma renders anoratidza katatu kamera kumashure zvakare - iyo ingave yekuvandudza kune iyo S10e's mbiri kamera system - pamwe neyakagadziriswazve kamera module zvakare.
22 Mbudzi 2019: Samsung Galaxy S11 inopa pamusoro
Vanopa runyerekupe Samsung Galaxy S11 yaonekwa kuburikidza webhusaiti 91Mobiles, ichishanda ne @onleaks. Yepamberi kubvuuruka kwerudzi urwu kwave kururamisa, saka izvi zvinogona kunge zviri dhizaini yeSamsung Samsung S11.
19 Mbudzi 2019: Samsung Galaxy S11 haizove nemapopoma ekuratidzira saHuawei Mate 30 Pro
Leaker Ice Universe yakati iyo Galaxy S11 yakatevedzana haizove ichidzika pasi iyo nzira yekuratidzira kwemvura kana zvasvika pakugadzira. Iyo tweet yakataura kuti bezels idiki pane iyo Galaxy Note 10 zvisinei.
Mushure mekunyatso bvunzurudzwa ne Samsung, Iyo Galaxy S11 yakatevedzana haishandise mapopoma emvura screen dhizaini, asi bezel idiki kupfuura Note10.
- Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2019
18 November 2019: Samsung Galaxy S11 inogona kupa 8K vhidhiyo kurekodha uye 108MP kamera
XDA Vagadziri vakashuma iyo yekupedzisira inogadziridza kuSamsung yeKamera app - Imwe UI 2.0 beta 4 - inopa humbowo hwehuwandu hwezvinhu zvitsva zvinogona (kana kuti zvisingaite) kuoneka paGlass S11 inosanganisira Director's View, Imwe Tora Mufananidzo, Husiku Hyperlapse, pamwe nerutsigiro ye8K kurekodha vhidhiyo.
Iyo yekuvandudza app yaivewo nehumwe humbowo hweramangwana Samsung chishandiso - icho chisina kutumidzwa zita - ichipa 20: 9 factor ratio uye 108-megapixel kamera.
12 Mbudzi 2019: Samsung Galaxy S11's hole-punch kamera ichave diki
Leaker Ice Universe yakati iyo Samsung Galaxy S11 ichaisa pamberi yakatarisana kamera mune imwe kunyange diki gomba-punch cutout kupfuura Mucherechedzo 10, ichivandudza chiitiko chekuona.
11 Nyamavhuvhu 2019: Samsung Galaxy S11 madhiri anodonhedza: matatu saizi, matatu mavara, ese maviri-pamucheto kuratidza
Sekureva kwaEvan Blass, iyo Galaxy S11 renji ichauya mumatanho matatu escreen ane 6.2-inch kana 6.4-inch modhi, 6.7-inch modhi uye 6.9-inch modhi. Iwo maviri madiki mamodheru - anofungidzirwa kunzi S11e uye S11 - anonzi ari kuuya muLTE uye 5G akasiyana, nepo yakakura S11 + ichizongopihwa chete mu5G.
Ishan Agarwal akawedzerawo kufungidzira kweGreen S11 nekupa zano kuti S11e ichauya neblue, grey uye pink color color, nepo S11 ichauya ingangoita yebhuruu, grey uye dema.
7 Nyamavhuvhu 2019: Samsung Galaxy S11 inogona kunge iine bhatiri rakaringana
Mufananidzo wakaburitswa kubva kuSecurity Korea nzvimbo (kuburikidza neGlass Club) yakaratidza bhatiri reGlass S11 se14.36Wh, izvo zvaizoreva kugona kweanotenderera 3730mAh.
Iyo Glass Club yakati zvakare Samsung iri kushanda paeciscope-senge kamera iyo inobvumira 5x optical zoom, yakafanana nekamera pane P30 Pro uye Oppo Reno 10x Zoom.
31 Gumiguru 2019: Samsung Galaxy S11 inogona kuuya neFace ID-yakafanana nechiso yekuzivikanwa chimiro
Mamwe mareferenzi akaoneka mune iyo Android 10 beta yeiyo Samsung Galaxy S10 inoratidza kuti Samsung iri kushanda pane 3D kumeso kwechimiro senge Apple's Face ID uye Google's Face Unlock.
Picasso - iyo codename yeS11 - yakataurwa mubeta zvakare nechimiro chekuzivikanwa kwechiso chinoratidza kuti tinogona kuchiona pane inotevera Galaxy S mureza.
7 Gumiguru 2019: Samsung Galaxy S11 ichava ne 5X Optical Zoom, iyo 108-megapixel kamera
Sekureva kweKorea saiti Iyo Elec, Samsung ichakurumidza kutanga kuyedza kamera ye5X Optical Zoom, iyo inonzi ndiyo yakagadzirirwa Samsung Galaxy S11. SamMobile anoti zvakare kamera iri paGirazi S11 ichava ne-108-megapixel sensor pamoyo wayo.
26 Nyamavhuvhu 2019: Samsung Galaxy S11 ingadai yakavandudza mu-kuratidza chigunwe chepfungwa sensor
Korea nhau kubuda, The Elec, akadaro maindasitiri masosi akati iyo Samsung Galaxy S11 ichave neyakavandudzwa mu-kuratidza chigunwe chemunwe. Sekureva kweshumo, iyo Active Area Dimension (AAD) iyo inoziva kana mushandisi akaisa munwe pachiratidziro ichave yakakura kwazvo - zvakapetwa muchokwadi.
24 Gunyana 2019: Samsung Galaxy S11e inogona kuve neyakaratidza miviri, patent inoratidza
Samsung yakaisa patent yechishandiso chakatarisana nechishandiso, icho vamwe vanofungidzira kuti chinogona kufanirwa neGirazi S11e nekuda kweiyo mbiri kumashure kamera. LetsGoDigital yakaita zvimwe zvinopihwa zve 3D patent, zvichitibatsira kuti titarise zvingaitwe netauni.
13 Gunyana 2019: Samsung Galaxy S11 inogona kuuya muCherechedzo 10 yakanaka Aura Glow kara sarudzo
SamMobile ataura kuti zvishandiso zveSamsung Galaxy S11 zvichauya neBlue, Pink, White uye Nhema sarudzo uye Samsung ichatora zita rekuti "Aura" kumberi, zvichireva kuti michina inogona kuuya muGreen Note 10's Aura Glow color.
Saiti iyi yakatiwo mhando dzinouya nemhando yepamusoro yekuchengetera 1TB uye sarudzo yekuchengetera yepasi pe128GB.
29 Nyamavhuvhu 2019: Samsung Galaxy S11 ichava nekadiki punch-hole kamera kupfuura Cherekedza 10
Leaker Ice Universe yakatumira zvimwe zvakati wandei "zvakasimbiswa 'zveiyo Samsung Galaxy S11. Anoti iyo Galaxy S11 yakanyorwa zita rekuti Picasso, ichapa yakakwidziridzwa yekamera uye software ichave yakavakirwa pane Android Q One UI 2.x.
Ice Universe zvakare yakati punch hole kamera pamberi pechishandiso ichave idiki pane iyo Galaxy Note 10.
18 Chikunguru 2019: Samsung inotanga kugadzirwa kwemasuru kwekutanga 12GB LPDDR5 Mobile DRAM
Samsung yakaziviswa yatanga kugadzirwa kwakawanda kwemaindasitiri ekutanga 12GB LPDDR5 nhare DRAM, inonzi yakagadziridzwa kugonesa 5G uye AI maficha mune anotevera mafoni.
Zvinonyatso kujeka kuti iyo Galaxy S11 inogona kuve imwe yeawo mafoni emangwana.
9 Chivabvu 2019: Samsung inotanga 64MP uye 48MP kamera sensors
Samsung yakaziviswa maviri nyowani kamera sensors - iyo 64-megapixel sensor uye 48-megapixel sensor. Iwo ma sensors maviri akaona Samsung ichiwedzera yayo 0.8μm image sensor lineup kubva iripo 20MP kusvika 64MP resolution.
Hapana chakave chakatsanangurwa kuratidza aya sensors anozoonekwa paGirazi S11 asi zvinoita senge zvine musoro kufamba, kunyanya nevanokwikwidza se Huawei vachipa zvinogadziriswa zvepamusoro pamakamera avo kumashure.
Galaxy S11: Kukadzi 11 kuvhurwa kwakasimbiswa, 108MP kamera, mutengo, zuva rekuburitswa uye dzimwe runyerekupe